तेजाबले पोलेको अनुहार लिएर रुँदै, अत्तालिँदै, दगुर्दै घर आएँ : सीमा बस्नेत - sunamerokatha
सुन मेरो कथा
आफ्नो कथा सुनाउनुहोस्
तेजाबले पोलेको अनुहार लिएर रुँदै, अत्तालिँदै, दगुर्दै घर आएँ : सीमा बस्नेत
आमा बुबा कामको सिलसिलामा काठमाडौं आउने अनि आफ्ना छोराछोरी पढाईका लागि ल्याउनै पर्ने वाध्यता आम गाउँघरको कथा हो । यस्तै कथा थियो सीमा बस्नेतको परिवारको पनि । रौतहटको गाउँबाट २०६८ सालमा काठमाडौं पसेकी सीमालाई यो शहर मन पर्न थाल्यो । सरकारी विद्यालय नै भएपनि यहाँको विद्यालयमा पढाइने तरिका राम्रो लाग्न थाल्यो । विद्यालयका शिक्षकशिक्षिका मन पर्न थाले । यहाँको रहनसहन, सरसुविधा मन पर्न थाले । विस्तारै सीमाको मन यहिं रमाउन थाल्यो ।
२०७१ सालको एस.एल.सी. परिक्षाका लागि सीमा तयार थिइ । फलामे ढोकाको संज्ञा पाएको यस परिक्षाको सामना गर्न थप ट्यूशन कक्षाहरु पनि सुरु गरेकी थिइ । तर एक दिन सीमाको जीवनमा यस्तो अप्रिय घटना आइपर्यो जुन उनले सोचेको पनि थिइन ।
“यति बिहान बिहानै नचिनेको मान्छेले कसरी लोला हान्यो?” भन्ने मनमा लाग्यो । “पछि त पोल्दै पोल्दै आयो ।”
यो कथा निरन्तर अघि बढ्दै गरेको सानी नानी सीमा बस्नेतको हो । उनै सीमा जो काठमाडौंमा घटेको एसिड प्रहार प्रकरणका एक पीडित बने । उनै सीमा जो जीवनमा आइपरेका यस्ता अकल्पनीय घटनालाई पाखा लगाउँदै अघि बढदै छिन् ।
ओमबहाल स्थित आफ्नो कोठामा आमासँग हाँस्दै सीमा ।
फोटो : बिकिल स्थापित
संगीत साभार: Movediz – Silence, Yoe Mase – Missing in Action
धेरै सुनिएको कथा
“त्यो हिमाल टाढा की ममी गएको ठाउँ टाढा?” भनेर छोरोले सोध्दा भक्कानिएर रोउँ झैं लाग्छ : लक्ष्मण रञ्जीत
चार वर्ष नाघी सक्यो, आमाको केहि खबर छैन: सुधा महर्जन
आमाले मलाई जिम नै नगर भन्नुहुन्थ्यो : महेश्वर महर्जन
मच्छिन्द्रनाथ एक कृषी विशेषज्ञ थिए: बिपिन्द्र महर्जन
सोचे जस्तो हुन्न जीवन: अनुला गुरुमा
दिदीको लागी घर छोडें, क्रान्तिको लागी दिदी छोडें : सखिना मुस्लिम
कुमारीले बिहे गर्नु हुन्न भन्ने कुरा गलत हो : पूर्व कुमारी श्रेरणा बज्राचार्य
माओवादी जनमुक्ति सेना सकियो भन्ने भ्रम नपरोस्: बिपना मल्ल
मलाई नागरिकता नदिनु भनेको मेरो आमाको अधिकार खोस्नु हो : सुरज हजारे दाहाल
प्रजातन्त्र त आयो तर मेरो छोरा निर्गुण कहिल्यै फर्केर आएन: मैंया स्थापित
This entry was posted on 20th May 2016 by sunakatha.
← एकादेशमा गरिब गरिबनी थियो लडाईं लडेर कारागारको गेटबाटै दाइलाई छुट्टाएँः ईश्वर तिमिल्सिना →
सुन मेरो कथा © २०१९
म सँग पनि कथा छ।
Math Captcha −2= 5